Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Mihabetsaka ny tombom-barotra amin'ny hotely eran-tany, tsy any Eropa ihany
Ho an'i Eropa, ny volana febroary dia iray hafa tamin'ny fanaintainan'ny tombom-barotra
Ny tombom-barotra lehibe azo natao isaky ny efitrano misy ao Etazonia dia nivadika ho tsara tamin'ny volana feb
Ny tahiry mahaliana any Etazonia dia tsy azo averina any Eropa
Mbola manelingelina an'i Eropa ny fanakanana mifandraika amin'ny COVID any amin'ny firenena
Ny indostrian'ny hotely amerikana dia nila volana iray toy ny volana feb. Ho an'i Eropa dia iray hafa tamin'ny fanaintainan'ny tombom-barotra.
Tao anatin'ny fihodinana iray tamin'ny volana teo aloha, ny tombom-barotra be isaky ny efitrano misy (GOPPAR) any Etazonia dia nivadika ho tsara tamin'ny volana febroary ary teo amin'ny $ 10.82, 675.5% ambony noho ny tamin'ny volana janoary. Na dia niditra an-tsokosoko aza ny fitsangatsanganana taorian'ny valo nandritra ny 10 volana lasa izay nahatonga ny fankalazana, ny GOPPAR tamin'ny volana febroary dia mbola 89.5% ihany noho ny tamin'ny herintaona lasa izay.
Miaraka amin'ny fiakaran'ny tombom-barotra dia ny fitsambikinana tao amin'ny efitrano roa sy ny vola miditra rehetra. RevPAR dia nitombo $ 14 tamin'ny Janoary ka hatramin'ny $ 50.81, raha TRevPAR kosa dia nitombo $ 20 ka hatramin'ny $ 73.81. Ny fibodoana ny volana dia saika nikatona tamin'ny 30%, izay mety ho marika avo indrindra hatramin'ny volana martsa 2020. Ny fiakarana 7-isan-jato isam-bolana isam-bolana dia nitombo tamin'ny taha ambony indrindra hatramin'ny volana martsa lasa teo.
Rehefa nitombo ny fidiram-bola, dia nihena hatrany ny fandaniana. Ny asa an-tsakany sy an-davany dia $ 33.13, izay 67.1% ambany noho ny tamin'ny ora lasa tamin'ny taona lasa ary latsaky ny $ 2 ny volana lasa.
Ny fandaniam-bolan'ny departemanta tsy voatsinjara dia mbola kivy nanerana ny solaitrabe YOY, ao anatin'izany ny fitaovam-piasana, nidina 22.9%. Nihena 49.6% YOY ny vidiny ambony rehetra.
Ny tombom-barotra dia voarakitra amin'ny 14.7% - ny haavony avo indrindra hatramin'ny volana febroary lasa teo ary ny fanintelony tao anatin'ny 12 volana dia tsara ny KPI.